Ny sidina mankany Bourgas, Zakynthos, Bruxelles, Chania, Larnaca, Paris ary Porto amin'ny Wizz Air dia mandefa indray avy any Budapest
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina mankany Bourgas, Zakynthos, Bruxelles, Chania, Larnaca, Paris ary Porto amin'ny Wizz Air dia mandefa indray avy any Budapest
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Momba ny Bulgaria • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana Gresy • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao • Vaovao Mafana Portugal • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Tsy niatrika fifaninanana, natolotry ny Wizz Air ny fifandraisan'i Budapest amin'i Zakynthos ny alahady teo, nanatevin-daharana ireo serivisy hafa tany amin'ny faran'ny herinandro tany Bruxelles Charleroi, Chania, Larnaca, Paris Orly, ary Porto.
Ny famoahana indray dia ny fifandraisan'ny vavahady hongroà voalohany amin'i Bulgaria.
Nosokafan'ny Wizz Air rohy indroa isan-kerinandro mankany Bourgas, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Bulgaria eo amoron'ny Ranomasina Mainty.
Wizz Air afaka manatsara ny laharan'ny sidina satria manamora ny fameperana ny dia mankany Budapest.
Wizz Air dia nanohy serivisy fito hafa avy any Seranam-piaramanidina Budapest ny faran'ny herinandro lasa teo, nanitatra indray ny tambajotra eropeanin'ny seranam-piaramanidina ary nanolotra safidin'ny dia lavitra kokoa ho an'ny mpanjifa indray. Ny fandefasana indray dia ny fifandraisan'ny vavahady hongroà voalohany amin'i Bulgaria, rehefa nanokatra rohy indroa isan-kerinandro mankany Bourgas, ilay mpitatitra vola lafo vidy (ULCC), mankany Bourgas, tanàna faharoa lehibe indrindra ao amin'ny moron'ny Ranomasina Mainty.
Tsy miatrika fifaninanana, Wizz Air namerina ny rohy Budapest amin'i Zakynthos ny alahady teo, nanatevin-daharana ireo serivisy hafa tany Brussels Charleroi, Chania, Larnaca, Paris Orly, ary Porto.
“Mahafinaritra ny mahita fa afaka manatsara ny isan'ny sidina isika isan-kerinandro satria manalefaka ny fameperana ny dia mankany Budapest”, hoy i Balázs Bogáts, Lehiben'ny Fampandrosoana Airline, seranam-piaramanidina Budapest. "Ny isan'ny toeran-kaleha miverina amin'ny sarintany misy anay dia mitombo ary ny tanàna lehibe rehetra ao amin'ny EU dia atolotra atsy ho atsy indray rehefa manantena ny fampidirana ny ID Green EU izahay."
Manohy ny fanamboarana azy indray ao Budapest, ary manamafy ny fiakaran'ny fisondrotana matetika amin'ny sarintany, amin'ny faran'ny volana Jolay Wizz Air dia hanidina amin'ny toerana 50, miasa serivisy 148 isan-kerinandro izay hanolotra seza 31,000 XNUMX isan-kerinandro avy ao amin'ny renivohitr'i Hongria.
Wizz Air, natsangana ara-dalàna ho Wizz Air Hungary Ltd. ary namboarina ho W! ZZ Air, dia zotram-piaramanidina Hongariana lafo vidy miaraka amin'ny birao foibeny ao Budapest. Ny seranam-piaramanidina dia manompo tanàna maro manerana an'i Eropa, ary koa toeran-kaleha sasany any Afrika Avaratra sy Moyen Orient.
Ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Budapest Ferenc Liszt, fantatra amin'ny anarana hoe Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Budapest Ferihegy ary mbola antsoina hoe Ferihegy ihany, no seranam-piaramanidina iraisam-pirenena manompo an'i Budapest renivohitra Hongroà, ary ny lehibe indrindra amin'ny seranam-piaramanidina efatra an'ny firenena.